Ragga Qaangaarka ah iyo Daawada finanka | Ragga Stylish
Finanku badanaa waxay la xiriiraan kaliya qaan-gaarnimada, laakiin rag badan oo waaweyn ayaa sii wada dagaalka miro dhabarka iyo qaybaha kale ee jirka labaataneeyada, soddon iyo xataa 40 sano kadib. Waxaa lagu qiyaasaa inay matalaan ilaa 25%.
Waxaa jira seddex sababood oo keena finanka: qanjidhada jimicsiga kacsan, xididdada timaha ku xiran (unugyada dhintay, sebum), iyo jiritaanka bakteeriyada lafta lafteeda. Waa wax macquul ah, sidaa darteed, waxa ay takhasusleyaashu dhahaan si loo daaweeyo finanka waa inaad barataa sida ugu wanaagsan ee loo maareeyo soo saarista maqaarka maqaarka.
Markaad finan leedahay, waxaa jira duufaan ah inaad wejigaaga ku dhaqdo saabuunta ugu adag suuqa, si ay nooga caawiso inaan ka saarno dhammaan saliida. Si kastaba ha noqotee, tani waxay kaliya u sababi doontaa maqaarka inuu bilaabo inuu soo saaro dheecaan badan si uu u hagaajiyo luminta. Halkii, sharad ku samee shay leh caano qaacido aan maqaarkaaga ka xanaajinayn oo u isticmaal maalintii laba jeer wejigaaga.
Finanka finanka ayaa mararka qaarkood shaqeeyaLaakiin waxay badanaa u oggolaanaysaa malax iyo bakteeriya inay ku faafaan unugyada ku xeeran, halkaas oo ay ku keeni karaan finan badan. Ma aha in la sheego nabarradii laga tagi lahaa haddii finku leeyahay cabbir aad u badan. Marka isku day inaad farahaaga ka fogeyso wejigaaga oo howshu u socoto.
Daawooyinka lagu daaweeyo ayaa noqon kara kuwo waxtar badan hadday yihiin kuwo tayo leh oo si sax ah loo isticmaalo. Hubso inay ku jiraan benzoyl peroxide, mucjiso mucjiso ah marka ay timaado in finanka la xakameeyo. Waxyaabaha kale ee la tixgelinayo waa saliid-saliideedka iyo saliidda geedka shaaha, oo shaqsi ahaan loo iibsan karo (waxaad ka arki kartaa xariiqyadan). Xusuusnowna: ha u maleynin inaadan awoodin inaad sameyso la'aan sheyga su'aasha ku jira. Furaha ayaa ah inaad uyar iyo in ka yar u isticmaasho koorsada ugu yaraan laba toddobaad illaa aad gebi ahaanba ka saareyso jadwalkaaga qurxinta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Is-qurxinta » Talooyin ku garaaca finanka dadka waaweyn
Seddex sababood oo lagu sagootinayo garka dhaadheer sanadka 2016